Maitiro ekuona iyo iPhone skrini pane TV ine Chromecast | IPhone nhau
Maitiro ekuona iyo iPhone skrini pane TV ine Chromecast
Kudzokorora skrini ye iPhone yedu paTV kwagara kuri kurota, zvirinani kusvika izvozvi Apple yakatisiyira sarudzo asi kushandisa Apple TV kuburikidza neAirPlay protocol kana tichida kuona skrini ye iPhone yedu pachiratidziro munguva chaiyo, kubva Nenzira imwechete iyo imwe nzira pakombuta yaive yekushandisa Mac uye ayo akavakirwa-mukati maturusi. Nekudaro, seizvo zvatino tarisa pa iPhone News iri kunyatso kugadzirisa matambudziko, Tinoda kukuratidza maitiro aunogona kuonesa yako iPhone skrini paTV uchingoshandisa Chromecast.
1 Iko kushanda: Replica
2 Iyo Replica yekumisikidza
3 Chigadzirwa: Chromecast
4 Chromecast marongero
Iko kushanda: Replica
Chinhu chekutanga chatichada i iPhone yedu kana iPad nechishandiso Replica yakaiswa. Ichi chishandiso chakasununguka zvachose, kunyangwe hazvo Iyo ine akateedzana emubhadharo wakasanganiswa uyo unovhura mamwe mashandiro uye kubvira € 0,99 kusvika € 16,99 yeiyo yakazara vhezheni mune imwechete kubhadhara. Nekudaro, kuti ubve munzira kana kubereka zvirimo nenzira yakajairwa, iyo yemahara vhezheni inopfuura zvakakwana uye ndiyo yandinokurudzira pakutanga kuti iwe uzviedze. Iyo fomati yakasarudzwa kuti ikwanise kusarudza kushandisa chishandiso yakaratidzika kwandiri seyakakodzera uye ini ndinoikurudzirawo
Replica: Screen Mirror TV Vhidhiyovakasununguka
Chirongwa inorema 35 Mb chete uye inowirirana nechero chishandiso chiri kumhanyisa vhezheni yeIOS 12 kana kupfuura, ndiko kuti, kuenderana kwacho kwakanyanya uye uchakwanisa kuwana zvikonzero zvishoma zvekusaedza. Ramba uchiverenga bhuku racho kusvika kumagumo nekuti tiri kuzoita raffle iyo iwe yaunogona kuhwina marezinesi egore rimwe chete ekunyorera uye nokudaro uchikwanisa kunyatso shandisa aya mabasa. Pakati pezvimwe zvinhu iwe uchave unokwanisa kuona, semuenzaniso, nhabvu yeMovistar + application paTV, chimwe chinhu icho kusvika parizvino chaisagona kuitwa neimwe nzira.
Iyo Replica yekumisikidza
Replica chikumbiro chiri nyore kwazvo, Kudzokorora kana kuonesa yedu iPhone paTV yedu, isu tinongofanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinovhura iyo Replica application
Dzvanya pane inodikanwa Chromecast iyo inoratidzwa pane yekumba skrini
Dzvanya pa "kutanga" uye mirira kuverengera kwemasekondi matatu
Zviri nyore kutanga kuratidza mufananidzo we iPhone yedu zvakananga paTV pasina chero rimwe dambudziko rakawedzerwa. Muchokwadi, zvinoita senge kwandiri kuti iko kureruka kwemushandisi interface iri pakati pezvimwe zvinhu imwe yesimba iyo Replica inotamba nayo pamusoro pemumwe mukwikwidzi, muchokwadi, ndiyo chete iyo yakandipa kuita kwakanaka kusvika pari zvino.
Nekudaro, zvingave sei zvisina kudaro, Replica ine zvakawanda zvakawanda zvinoshanda, kana tikabaya pane yekufananidza icon kumusoro kurudyi isu tichawana anotevera mamenyu.
Sarudzo ye chitarisiko:
Zvakajairika: Inoratidza iyo iPhone mune chaiyo chaiyo ratio, kana isu tikashandisa iyo iPhone mune panoramic mode inozoonekwa ine matema mabhande pazasi, uye kana isu tikashandisa iyo yakatwasuka inozoonekwa zvizere.
Kurisa: Zoom in pakati pechidzitiro. Kana isu tikashandisa iyo iPhone mune panoramic mode, ichaonekwa isina matema mabhendi, asi zvimwe zvemukati zvinorasika.
Speed: Inoderedza bhatiri uye bhendi kunwa, ichipa hurombo resolution asi shoma yekuisa lag.
Yakadzikama: Kwandiri sarudzo yakanakisa, inopa inoshamisa yemhando yemhando chiyero uye yakadzika yekuisa lag.
Unhu Hwakanaka: Pano tinowana chisarudzo chakakwirira chaizvo, asi zvinokanganisa kunonoka.
Sarudza maitiro: Inotaridza iyo iPhone screen yekuisa paTV.
Izvi ndizvo zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuti replica inoshanda sei, haigone kuve yakapusa uye yakajeka, uye pamusoro pezvose zvakakosha chinhu ndechekuti Iko inokutendera iwe kuti ugovane zvirimo zvechidzitiro che iPhone yako neTV kuburikidza neCromecast pasina chero matambudziko.
Iyo Chromecast chishandiso chiri nyore kwazvo chine HDMI kubatana uye chiteshi che microUSB senzvimbo yesimba Icho chishandiso chakachipa uye chinowanzoita 39,00 euros zvakananga muchitoro cheGoogle, Zvisinei, hazvishamisi kuwana zvipo zvinotibvumira kuwana Google Chromecast nemitengo yakaderera zvikuru, ndinokurudzira kuti uende kunzvimbo yako yekutengesa yakadai seWorten, MediaMarkt kana El Corte Inglés kana uchida kutenga imwe, zvinosuruvarisa kuti haugone kutenga zvakananga kubva kuAmazon nekuda kwezvakanaka zvikonzero zvemakwikwi pakati pavo.
Uye ndezvekuti kubvira kusvika kweAmazon Fire Stick iyo ine Alexa, yayo pachezvayo uye inoshanda zvizere sisitimu inoshanda, iyo Google Chromecast yarasikirwa nemukurumbira muiyi smart "matanda" ekupa materevhizheni edu nezvitsva zvitsva Ini chaizvo ndine zvese zvishandiso, asi kana ndaifanirwa kusarudza imwe ini ndinogara ndichitsigira Fire Stick. Ngazvive sezvazvingaite, vazhinji vedu tine Google Chromecast kumba uye mukana uyu wekuteedzera iyo iPhone skrini iri kurongerwa kwatiri izvozvi yakanaka kune zvinhu zvakawanda, saka kana iwe uine mutengo wakanaka iwo wakanaka uye pamusoro pezvose sarudzo yakapusa.
Kuita kuti Chromecast ishande zviri nyore kwazvo, Isu tinongofanirwa kurangarira kuti iwe unofanirwa kutora iko Kumba kweGoogle application kunowanikwa muApple App Store kuti iite kuti ishande kekutanga uye kubva ipapo zvichienda kunonakidzwa nayo.
Kana tangove neChromecast yedu yakabatana neTV isu tichaita gadzira:
Isu tinovhura Google Home application kurodha pasi pane yedu iPhone kana iPad
Isu tinokupa iwe kuti utsvage zvishandiso kumusoro kurudyi
Tinomirira Google Chromecast yedu kuti isvike uye isarudze
Isu tinoongorora kuti iyo imwecheteyo alphanumeric kodhi inoonekwa pane ese ari maviri TV uye yedu iPhone / iPad uye tinoisimbisa mune iko kunyorera
Tiri kuzobatanidza iyo Chromecast kune inowanikwa Wi-Fi network, isu tinongo sarudza iyo uye nyora password
Isu tinomirira iyo yakakodzera yekugadziriswa kuti iitwe kana imwe iripo
Kamwe iyo Chromecast yaratidza Wallpaper neiyo nguva uye inoita kunge inoshanda mune yedu Google Kumba application isu tinogona kuishandisa pasina dambudziko. Tinogona kuisa mari idzi pakati pezvimwe zvinhu, nekuti izvi iwe unongofanirwa kutora mukana kune ese hunhu hwatinopihwa neGoogle Home application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona iyo iPhone skrini pane TV ine Chromecast
Ini ndinogona kutumira zvirimo zvemitambo yenhabvu kubva kuMovistar application?
Iyo yepasi rose smart speaker musika inotungamirwawo neAmazon
Iyo nyowani iPad Pro ine 5G ichasvika inotevera kudonha 2020